अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३ – नेपाल कानुन आयोग
अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
अनौपचारिक शिक्षाले विभिन्न किसिमका समूहको लागि आफ्नो कार्य लक्ष्य बनाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सबैलाई साक्षर बनाउने दृष्टिकोणले दुर्गम र भित्री बस्तीका निरक्षरहरू, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू र कारखानाका निरक्षर कामदारहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाका लक्षित समूहहरूको रूपमा लिइएको छ । ती लक्षित समूहहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाले सचेतना शिक्षा, साक्षरता, साक्षरोत्तर र निरन्तर शिक्षा (सीपमूलक, आयमूलक कार्यक्रमहरू) सञ्चालन गर्दछ । वैकल्पिक शैक्षिक अवसरको दृष्टिकोणले अनौपचारिक शिक्षाले विद्यालय नभएका वा छाडेका युवायुवती तथा केटाकेटीहरूको लागि खुला विद्यालय, स्थानीय सीपमा आधारित प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ । पेसागत शिक्षा ९ऋबचभभच भमगअबतष्यल० को दृष्टिकोणले अनौपचारिक शिक्षाले विशेषगरी शारीरिक श्रम गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने समूहहरूलाई समेत आफ्नो लक्षित समूह बनाई तिनलाई परामर्श सेवा, तालीम र प्राज्ञिक सहयोग गर्दछ । सामाजिक समाहितता ९क्यअष्ब िष्लअगिकष्यल० को दृष्टिकोणले अनौपचारिक शिक्षाले लैंगिक, जात
विशेष ९ऋबकत कउभअषष्अ०, जातीय ९भ्तजलष्अ०, भौतिक र भाषिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी तिनीहरूलाई उपयोगी हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ । विगतका अनुभवहरूका आधारमा अनौपचारिक शिक्षामा अनेकन चुनौतीहरू (सोचसम्बन्धी,
व्यवस्थापनसम्बन्धी र कार्यान्वयनसम्बन्धी) देखिएका छन् । कसरी अनौपचारिक शिक्षाको विस्तारित स्वरूपबारे विभिन्न तहमा जानकारी गराउने ? कसरी विस्तारित सोच सापेक्ष मानवीय स्रोतहरूको परिचालन गर्ने ? कसरी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्ने ? कसरी तिनीहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने ? कसरी व्यक्तिगत क्षमताअनुसार आ–आफ्नै गतिमा सिक्नसक्ने
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ? यी प्रश्नको समाधानका लागि अनौपचारिक शिक्षाको नीति एवम् कार्यनीतिहरूको आवश्यकता महसुस भएको थियो । सोही आवश्यकता पूरा गर्ने अभिप्रायले समय सापेक्ष अनौपचारिक शिक्षाका विस्तृत अवधारणाहरूलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३ माघ २५ गतेको निर्णयानुसार अनौपचारिक शिक्षाको नीति, २०६३ स्वीकृत गरेको छ । अनौपचारिक शिक्षाको नीति, कार्यनीति र रणनीतिहरू अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको लागि मार्ग निर्देश हुनेछ ।
October 1, 2018	in अनौपचारिक शिक्षा नीति, २०६३
१. विभिन्न उमेर र वर्गका व्यक्तिहरूलाई
१. विभिन्न उमेर र वर्गका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुरूपको प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, सीप र सूचना प्रदान गर्नेगरी अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
यस नीतिअन्तर्गत निम्न लिखित कार्यनीतिहरू अपनाइनेछ ः
♦ प्रौढ, महिला र युवालाई साक्षर गराइनेछ ।
♦ वैकल्पिक विद्यालय शिक्षामार्फत विद्यालय जान नपाउने र बीचैमा विद्यालय छाड्नेहरूलाई विद्यालयीय शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनेछ ।
♦ विद्यालयीय शिक्षामा जान नसक्नेहरूका लागि व्यावसायिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
♦ खुला विद्यालयमार्फत विद्यालय तहको समकक्षी शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
♦ विभिन्न तहका शैक्षिक क्षमता र सीप भएका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिलाइनेछ ।
♦ सचेतनाका लागि मौखिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ खुला विश्वविद्यालयमार्फत् उच्च तहको समकक्षी शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
माथिका नीति एवम् कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन् ः
♦ अनौपचारिक शिक्षा शैक्षिक सुचना प्रणाली को आधारमा गाउँ÷नगर शिक्षा योजना तयार पार्ने र यो योजनालाई जिल्ला आवधिक योजना र जिल्ला शिक्षा योजनाको अंगको रूपमा विकसित गर्ने ।
♦ शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरी खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।
♦ गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूले विभिन्न तहका शैक्षिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति निरन्तर शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने ।
♦ छलफलसत्र र सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरी मौखिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
♦ साक्षरोत्तर शिक्षालाई आयआर्जन कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने ।
♦ पढ्ने विषयवस्तु तथा पढाउने शैलीमा जीवनोपयोगी सीपहरू आबद्ध गर्ने ।
♦ छुट्टै खुला विश्वविद्यालय नखुलेसम्म उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूबाटै उच्च तहको समकक्षी शिक्षा उपलत्तध गराउने ।
२. शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित वा बीचैमा पढाइ छाडेकाहरूलाई
२. शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित वा बीचैमा पढाइ छाडेकाहरूलाई औपचारिक शिक्षा सरह मान्यता भएको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
यस नीति अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यनीतिहरू अपनाइने छन् ः
♦ वैकल्पिक विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिक तह समकक्षी बनाइनेछ ।
♦ प्रौढ÷महिला साक्षरता कक्षालाई क्रमशः प्राथमिक तहको समकक्षी बनाइनेछ ।
♦ वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमलाई क्रमशः बाह्र कक्षा बराबरको बनाइनेछ ।
♦ खुला विद्यालयमार्फत निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह बराबरको शिक्षा दिइनेछ ।
♦ खुला विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालयको समकक्षी बनाइनेछ ।
♦ पेशागत र व्यावसायिक कोर्सहरूलाई ननक्रेडिट कोर्सको रूपमा विकसित गरिनेछ ।
♦ संश्लेषित ९ऋयलमभलकभम० कोर्सको सहयोगले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एक अर्काको समकक्षी बनाइनेछ ।
♦ सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई शिक्षाको विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरिनेछ ।
♦ विभिन्न उमेर समूहका बालबालिका, किशोर किशोरी, प्रौढ तथा महिलाहरूका लागि उपयोगी हुनेगरी अनौपचारिक शिक्षाको कार्यक्रम बनाउने ।
♦ औपचारिक शिक्षोन्मुख अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरू प्राथमिक तहदेखि क्रमशः विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षासँग मिल्दोजुल्दो बनाउने ।
♦ संश्लेषित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यांशहरू बनाउने र लागू गरिने । यस्ता पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यविषयहरू प्राथमिक तहदेखि क्रमशः विश्वविद्यालय तहसम्मका हुने ।
♦ स्वाध्यायनबाटै पढेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार परीक्षा र मूल्यांकनका लागि आधिकारिक शैक्षिक संस्थाद्वारा परीक्षाको माध्यमबाट समकक्षता प्रमाणपत्र दिइने ।
♦ स्वाध्यायन सामग्री निर्माण र सञ्चालन पद्धति विकास गरी त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने ।
३. शिक्षामा पहुँच बढाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ
३. शिक्षामा पहुँच बढाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
यस नीतिअन्तर्गत निम्नकार्यनीतिहरू हुनेछन् ःः
♦ मागमा आधारित सघन साक्षरता कार्यक्रम
♦ अनौपचारिक शिक्षामा महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
♦ स्वयंसेवी र सहयोगी व्यक्तिहरू परिचालन गरिनेछ ।
♦ खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयमार्फत् समकक्षी कार्यक्रम चलाइनेछ ।
♦ विभिन्न निकायहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत खुला विद्यालय, पेसागत शिक्षालय र व्यावसायिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न अनुमति तथा सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
♦ स्वयंसेवी र सहयोगीहरूका लागि तालीम सामग्री विकास गरिनेछ ।
♦ जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ मौखिक साक्षरता कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ औपचारिक शिक्षा कार्यक्रममार्फत् अनौपचारिक मोडबाट समकक्षी स्वरूपको शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
♦ रोजगारी दिने संस्था÷व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपले आफ्ना श्रमिकहरूलाई स्तरअनुसारको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
♦ दुर्गम र सहरी बस्तीका भित्री भागमा बसेका बालबालिका, युवायुवती, दलित, महिला, धार्मिक समूह, जाति, जात विशेष तथा बालश्रमिकलाई कामको प्रकृति हेरी विविध खाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
♦ सबैखाले संघ संस्था र सञ्चारका माध्यमहरूलाई परिचालन गरिनेछ ।
♦ सामाजिक, आर्थिक एवम् शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउने उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षक र सहयोगी कार्यकर्ता तयार पारिनेछ ।
♦ आर्थिकरूपले विपन्न सहभागीहरूलाई साक्षर बनाई आयआर्जन समूहमा आबद्ध गरिनेछ ।
♦ समुदाय परिचालन कार्यक्रममार्फत् सर्वेक्षण गरी गाउँ÷नगर शिक्षा योजना बनाउने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले परिवारिभित्रको लक्षित व्यक्तिसमेत पहिचान गरी त्यसलाई मिल्ने गरी कार्यक्रमहरूको तय गर्ने ।
♦ स–साना समूहका साक्षरता कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।
♦ विभिन्न कुनाकाप्चा र समूह उपसमूहमा रहने व्यक्तिहरूलाई सेवा पु¥याउन स्वयंसेवीहरू तयार गरी परिचालन गर्ने ।
♦ लक्षित क्षेत्रहरूमा प्रौढ÷महिला साक्षरता, मौखिक साक्षरता कार्यक्रम, वैकल्पिक विद्यालय, खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयहरूको विस्तार गर्ने ।
♦ छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू र प्याकेजहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
♦ कार्यक्रमहरू अनौपचारिक शिक्षाका शिक्षार्थीहरूको समयानुकूल सञ्चालन गर्ने ।
♦ साक्षरता न्यून रहेका भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यक्रम लक्षित गर्ने ।
♦ साक्षरता न्यून रहेका वर्ग जात जातिमा कार्यक्रम लक्षित गर्ने ।
♦ विशेष अवस्थाका बालबालिका जस्तैः द्वन्द्वबाट पीडित र बालश्रमिकहरूमा कार्यक्रमहरू लक्षित गर्ने ।
४. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाई सामग्री
४. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाई सामग्री निर्माण तथा वितरण प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्दै लैजाने सन्दर्भमा विकेन्द्रित गरिनेछ ।
यस नीतिअन्तर्गत निम्निलिखित कार्यनीतिहरू अपनाइने छन् ः
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी साक्षरता तथा प्राथमिक तहको अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाइसामग्री निर्माण, उत्पादन एवम् वितरण गर्नेछन् ।
♦ प्रौढ, महिला, बाल शिक्षा र वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रमका सामग्रीको गुणस्तर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
♦ खुला विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाइसामग्रीको स्तर निर्धारण तोकेबमोजिमको हुनेछ ।
♦ खुला विश्वविद्यालयले यसका क्याम्पसहरूका लागि गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि बनेका सामग्रीहरू लैंगिक, जातविशेष, जातीय र भाषिक दष्टिले विश्लेषण गर्दा उपयुक्त ठहरिनु पर्नेछ । यसको उपयुक्तता अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रद्वारा मूल्यांकन हुनेछ ।
♦ मूल पाठ्यक्रम तथा मूल सामग्रीको खाका बनाउने क्रममा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहभागी गराइनेछ ।
♦ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र वितरणमा सूचना प्रविधि चालन गरिनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आधारभूत तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमका लागि अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धिहरूको सूची तयार गरी अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्रीबनाउने संस्थालाई सो सूची उपलब्ध गराउने ।
♦ शैक्षिक सामग्रीहरूमा जिवनोपयोगी सीपहरू समावेश गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालक, निर्णयकर्ता, सामग्री उत्पादक र दाताहरूसँग बसेर यस्तो सूचीलाई अद्यावधिक गर्ने ।
♦ अद्यावधिक सूचीअनुसार व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आवश्यक सामग्रीहरू बनाउने ।
♦ समकक्षताका लागि वैकल्पिक विद्यालय, खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र सहायक एवम् पूरक सामग्रीहरू अनौपचारिक शिक्षाका अपेक्षित उपलब्धिका आधारमा बनाउने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आफ्ना सबैखाले वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रमहरूको लागि संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाउने, संशोधन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने ।
♦ इच्छुक शैक्षिक संस्थाहरूलाई संश्लेषित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था एवम् व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृति तथा सहयोग लिई विभिन्न भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र सहायक एवम् पूरक सामग्रीहरू तयार गर्ने, छाप्ने र वितरण गर्ने र एकअर्काका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने कामहरू गर्ने ।
♦ ती सामग्रीहरूको सिकाइ उपलब्धि र उपयुक्तता स्तर निर्धारण सम्बन्धित संस्थाले गर्ने ।
♦ स्थानीय तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र पूरक सामग्रीहरूको स्थानीय बजारमा उपलब्धता, ती सामग्रीहरू शैक्षिक उपलब्धिको अद्यावधिक सूचीअनुसार भए नभएको र जात विशेष, जातीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक र अपांगताका मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राखिएको वा नराखिएको सम्बन्धित संस्थाले एकिन गर्ने ।
♦ विपन्न एवम् लक्षित समूहलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालकले पाठ्यसामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
५. शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र समता
५. शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र समता प्राप्त गर्नका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन र संयोजनको आधार बनाइनेछ ।
यस नीतिअन्तर्गत निम्नलिखित कार्यनीतिहरू अपनाइनेछ ः
♦ सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समूह, विद्यालय, स्थानीय निकाय र सरकारी संस्थाहरूले एकल वा संयुक्तरूपमा तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
♦ समुदायका आवश्यकताअनुसार शैक्षिकलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ समुदायका प्रौढ तथा युवा सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य जीवनोपयोगी सीपलाई ध्यानमा राखी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ सामुदायिक विकास, उत्पादन वृद्धि र सांस्कृतिक संरक्षण तथा निरन्तर शिक्षाका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई परिचालन गरिनेछ ।
♦ स्थानीय निकायले नयाँ क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्दा विशेष लक्षित समूहलाई ध्यान दिने ।
♦ सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई सबै किसिमको अनौपचारिक शिक्षा विस्तारका लागि केन्द्रविन्दु बनाउने ।
♦ विभिन्न व्यक्ति, समूहलाई परिचालन गरी समुदायमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने ।
♦ समूहमा आबद्ध महिलाहरूको निम्ति शिशुस्याहार केन्द्रको प्रबन्ध गर्ने ।
♦ समुदायको आवश्यकताअनुसार समूहको हितका लागि विभिन्न विकासात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने ।
६. विकेन्द्रीकृत तरिकाबाट अनौपचारिक शिक्षा
६. विकेन्द्रीकृत तरिकाबाट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ
यस नीतिअन्तर्गत निम्निलिखित कार्यनीतिहरू हुनेछन् ः
♦ सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय निकायहरूको एकल र संयुक्तरूपमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ ।
♦ अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण गर्दा सहभागितात्मक विधि अपनाइनेछ ।
♦ सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनपश्चात् स्थानीय एवम् केन्द्रीय तहमा छलफल सत्रहरूको आयोजना गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने अन्य निकायहरूको अनुगमन गर्नका लागि बेलाबेलामा ती निकायहरूको निरीक्षण गर्ने, समूहमा छलफल गराउने र स–साना अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनौपचारिक शिक्षा एकाइलाई अनिवार्य रूपमा आ–आफ्ना कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यमा सघाउ पु¥याउने ।
♦ प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालयअन्तर्गतका वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने ।
♦ सामुदायिक परिचालकले आफ्नो केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित बाल÷प्रौढ÷महिला साक्षरता कक्षाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
♦ सबैखाले सुपरिवेक्षकहरूले आफूले गरेको निरीक्षणको प्रतिवेदन गाविस÷नपा र सम्बन्धित संस्थामा पठाउने ।
♦ अन्य संस्थाहरूले चलाएको खुला विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने काम सम्बन्धित निकायले तोकेको व्यक्ति÷संस्थाको हुने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले आ–आफ्नै आन्तरिक सुपरिवेक्षकहरू भर्ना गर्ने ।
♦ सुपरिवेक्षकहरूको योग्यता तोकेबमोजिम हुनुपर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताले सहभागीको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्नका लागि उनीहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल राख्ने ।
♦ स्थानीय जिल्लास्तरीय निकायहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तोकेबमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।
७. साधन र स्रोत जुटाउने तथा सदुपयोग
७. साधन र स्रोत जुटाउने तथा सदुपयोग गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू बीच साझेदारी,
सञ्जाल र समन्वय कायम गरिनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बद्ध सबै निकायहरूको केन्द्रीय कार्यथलोका रूपमा साझेदारी, सञ्जाल र समन्वयको कार्य गर्नेछ ।
♦ राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मानवीय, आर्थिक र भौतिक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनेछन् ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को संयोजकत्वमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग पाठ्यसामग्री तयार गर्न र विषयवस्तुको दोहोरोपन कम गर्न आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा परिषद्मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्य दातृ संस्थाहरूसँग समन्व्य गरी “सबैको लागि शिक्षा” को उद्देश्य प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ ।
♦ गाविस÷नगरपालिकाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिन सक्नेछन् ।
♦ खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयले मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको आपसी साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछन् ।
♦ कार्यक्रमहरू बीच दोहोरोपन हटाउन कार्यान्वयन तहमा कार्यगत समन्वय र साझेदारी गरिनेछ ।
रणनीति माथिका नीति एवम् कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन् ः
♦ व्यक्तिगत एवम् संस्थागत अनुभव आदान प्रदान गरेर अनौपचारिक शिक्षाका सहकर्मीहरू बीच मानवीय स्रोतको साझेदारी गर्ने ।
♦ दोहोरोपन हटाई स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमका सहकर्मीहरू बीच साझेदारी गर्ने ।
♦ जिल्लामा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघ संस्थाहरूको रोस्टर जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनौपचारिक शिक्षा एकाइमा अनिवार्य रूपले राख्ने ।
♦ अनुसन्धानलगायतका अनौपचारिक शिक्षाका विविध पक्षमा साझा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आफ्ना साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा मानवीय स्रोतको स्तरवृद्धि गरी अद्यावधिक गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षाका विविध तहमा आर्थिक र भौतिक साधन स्रोतहरूको आदान प्रदान गर्ने ।
♦ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिविसको सामाजिक समिति र अनौपचारिक शिक्षा समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनौपचारिक शिक्षा एकाइसँग कार्यगत सम्बन्ध राख्ने ।
♦ सामाजिक समितिको संयोजक जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको सदस्य रहने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा समितिले जिल्लाभरका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू र जिल्ला महासंघले अनौपचारिक शिक्षा समितिसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नियमित छलफल गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा परिषद् र जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने ।
♦ सञ्चार क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा पत्रपत्रिकाहरू उपलब्ध गराउने ।
♦ सञ्चार क्षेत्रसँग साझेदार गरी अनौपचारिक शिक्षाबारे प्रचार प्रसार गर्ने ।
♦ स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा मावनीय, भौतिक र आर्थिक स्रोतको साझेदारी गर्ने ।
♦ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझेदारी गर्नको लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा समाज कल्याण परिषद्मार्फत जाने ।
८. पहुँच सुनिश्चित गर्न
८. पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर तथा सहअस्तित्व कायम गर्न समावेशी शैक्षिक नीतिहरू अपनाइनेछ ।
♦ जातीय, जात विशेष, लैंगिक, भाषिक र अपाङ्गता विभेद अन्त गर्नका लागि विशेष शैक्षिक वातावरण तयार गरिनेछ ।
♦ विविध खाले अपाङ्गहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
♦ सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित बालबालिका तथा प्रौढलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
♦ बालश्रमिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
♦ तोकिएको न्युनतम योग्यता भएका पिछडिएका समुदाय, महिला र स्थानीय भाषा बोल्नसक्ने व्यक्तिलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका सहयोगीकार्यकर्ता, सुपरिवेक्षक र स्रोतव्यक्ति बनाइनेछ ।
♦ कुन भाषामा पढ्ने पढाउने भनी छान्ने अधिकार समुदाय÷समूहलाई दिइनेछ र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरणको प्रक्रिया अपनाइनेछ ।
♦ भाषिक सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार बहुसांस्कृतिक सिकाइ गरिनेछ ।
♦ मातृभाषामा साक्षरता सामग्रीहरूको निर्माण गरिनेछ ।
♦ सूचना प्रविधि ९क्ष्ऋत्० को माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षाको पहुँच व्यापक बनाइनेछ ।
♦ पिछडिएका समुदायका संस्थाहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
♦ प्रशिक्षक÷सहयागीकार्यकर्ता÷शिक्षक÷सुपरिवेक्षक र परिचालकहरूलाई समाहित शिक्षण विधिबारे तालीम दिने ।
♦ जातीय र जात विशेष (दलित, जनजाति, लोपन्मुखजाति) लैङ्गिक, भाषिक, अपाङ्ग, बालश्रमिक र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरूको साझा तथा विशेष समस्याबारे छलफल गरी प्रशिक्षक÷सहयोगीकार्यकर्ता÷ शिक्षक÷सुपरिवेक्षक र परिचालकहरू तयार पार्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले प्रशिक्षक, सहयोगीकार्यकर्ता, शिक्षक, सुपरिवेक्षक र परिचालकहरूलाई समूह विशेषको स्थानीय भाषा र साझा मुद्दा एवम् समसयाबारे प्रबोधीकरण गर्ने ।
♦ स.का.÷शिक्षकहरूलाई स्थानीय भाषामा प्रकाशित सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने ।
♦ मूल र सहायक पाठ्यसामग्रीका अन्त्यमा त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दावलीलाई विभिन्न भाषामा अर्थिनेगरी शब्दको अर्थ दिने ।
९. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउ
९. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने सबै संस्थाहरूको साझा तथ्याङ्क भण्डार बनाइनेछ ।
♦ स्थानीय निकाय, जिल्ला वा केन्द्रमा उपलब्ध तथ्यांकहरूलाई प्रयोग गरी लक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
♦ स्थानीय निकायले सामुदाय परिचालकमार्फत् सर्वेक्षणगरी गाविस÷नपा तहमा अनौपचारिक शिक्षा शैक्षिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र उपलब्ध तथ्यांकलाई प्रणालीबद्ध रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ ।
♦ जिशिकाको अनौपचारिक शिक्षा एकाइले सो सर्वेक्षणमा बालश्रमिक, विद्यालय नजाने बालबालिका र निरक्षर महिला तथा पुरुष र दलित, जनजाति तथा धार्मिक समूहसम्बन्धी जानकारी समावेश गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाहरूले एउटै डाटाबेस प्रयोग गर्नसक्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले राष्ट्रिय एवम् जिल्लास्तरीय डाटाबेस बनाउने काममा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।धधध।
♦ राष्ट्रिय जनगणनामा साक्षरतासम्बन्धी सही तथ्यांक बटुल्न अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गर्नेछ ।
♦ पिछडिएका समुदायका संस्थाहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि प्राथमिकता दिनेछ ।
♦ म्बतब दबकभ तयार गर्दा मष्कबननचभनबतभ मबतब तयार गर्नेछ । रणनीति माथिका नीति एवम् कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन् ः
♦ गाउँ शिक्षा योजना÷नगर शिक्षा योजनाद्वारा संकलन गरेको साक्षरतासम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गर्ने ।
♦ उपलब्ध जिल्लास्तरीय तथ्यांकको निचोडलाई जिशिकामा राख्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको जिल्लागत तथ्यांकको निचोड अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा राख्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांकहरू डाटावेसमा समावेश गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले आ–आफ्नो दक्षता ९क्ष्लतभचलब िभााष्अष्भलअथ० र मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
♦ उपलब्ध तथयांकहरूलाई लैंगिक, जातीय, जात विशेष, भाषिक, धार्मिक समूह र अपाङ्गता छुट्टिने गरी व्यवस्थित गर्ने ।
♦ साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयका विज्ञहरू, तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालक, सहयोगीकार्यकर्ता, शिक्षक, तालीमकर्ता, स्रोतव्यक्ति, निरीक्षक, सबैको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
♦ डाटाबेसका लागि तीन किसिमबाट प्राविधक एवम् प्रशासनिक तथ्यांकहरू संकलन गर्ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आफ्नो फारमकमार्फत बटुलेको तथ्यांकबाट, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने संस्थाहरूले पठाएको प्रतिवेदनबाट र मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूबाट ।
♦ डाटाबेसलाई वेब पेज, इ–मेल आदिको माध्यमबाट सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने ।
♦ सम्बन्धित संस्थाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका असल अभ्यासहरूको अभिलेख राख्ने र प्रचारप्रसार गर्ने ।
१०. कार्यक्रमलाई सवलीकरण गर्न
१०. कार्यक्रमलाई सवलीकरण गर्न र कार्यरत जनशक्तिको कार्यदक्षता बढाउन तालीम, अनुसन्धान, स्वानुगमन एवम् प्रवर्तनकार्यलाई समावेश गरिनेछ ।
♦ प्रत्येक खाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममा अनुसन्धान एवम् प्रवर्तनलाई आबद्ध
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आफ्ना र अन्य संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा अनुसन्धान तथा प्रवर्तनलाई अनिवार्यरूपले आबद्ध गराइनेछ ।
♦ अनुसन्धान एवम् प्रबर्तन कार्यलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका विभिन्न तहमा आबद्ध गर्ने ।
♦ परिचालक, सहयोगीकार्यकर्ता÷शिक्षकको कार्यक्षेत्र भित्रै अनुसन्धान एवम् प्रवर्तनलाई समावेश गर्ने ।
♦ प्राप्त अनुसन्धान एवम् प्रवर्तनको नतिजा विश्लेषण गरी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, तालीम आदिमा समयानुकूल संशोधन गर्ने ।
११. “सबैका लागि शिक्षा” का लक्ष्यहरू
११. “सबैका लागि शिक्षा” का लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न निजी, सरकारी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ ।
♦ साधन र स्रोतको साझेदारी गरिनेछ ।
♦ संयुक्त प्रयासमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
माथिका नीति एवम् कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन्
♦ निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध भएका मानवीय र भौतिक स्रोतहरूको आदानन प्रदान गरी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने ।
♦ ट्रेडयुनियनहरूले आफ्ना कामदारहरूका लागि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र सोको तथ्याङ्क संकलन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अनौपचारिका शिक्षा केन्द्रमा समेत पठाउने ।
१२. अनौपचारिक शिक्षाको वित्तीय व्यवस्था
१२. अनौपचारिक शिक्षाको वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रको आर्थिक अवस्था एवम् नीतिअनुसार हुनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा अन्य संघ संस्थाले राष्ट्रको आर्थिक नीतिको परिधिभित्र रहेर आ–आफ्नो वित्तीय व्यवस्था मिलाउने छन् ।
♦ गाउँ÷नगर शिक्षा योजनाअनुरूप उक्त निकायहरूलाई एकमुष्ट अनुदान दिने र सो रकम फ्रिज नहुने प्रबन्ध गर्ने ।
♦ एकमुष्ट अनुदान प्राप्त निकायले स्वविवेकमा स्रोतको बाँडफाँड गर्ने ।
♦ वैकल्पिक विद्यालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने मातृविद्यालय तथा गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थापन खर्च दिने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले सामाजिक लेखापरीक्षण गराउने ।
♦ नोकरीदाता÷उद्योग÷कारखानाले आफ्ना कामदारहरूका लागि लागत साझेदारी गरी अनिवार्यरूपमा आधारभूत अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध गराउने ।
♦ तोकिएको सर्तमा सहयोगी कार्यकर्ता र निरीक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको क्रियाशीलतामा जोडा कोष र साझेदारी कोषको प्रबन्ध गर्ने ।
१३. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन
१३. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायले परिचालक को भूमिका खेल्नेछ । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालकहरूले भने विभिन्न मोडालिटिहरू अपनाउन सक्नेछन् । तिनमध्ये स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र शिक्षालय मोडालिटिहरू प्रमुख हुनेछन् ।
♦ स्थान, आवश्यकता र परिस्थिति हेरी कुनै पनि मोडेलबाट अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
♦ कुनै पनि मोडेलबाट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको परिधिभित्र रही सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्नेछ ।
♦ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न समिति एवम् उपसमितिहरू बनाउन सकिनेछ ।
♦ जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने एकाइ गठन गरिनेछ ।
♦ उक्त एकाइहरूले शैक्षिक एवम् गैरशैक्षिक संस्थाहरूले चलाएका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको रेखदेख र अनुगमन गर्नेछन् ।
♦ प्रत्येक मोडेलमा अनौपचारिक शिक्षाबारे जानकार, सहजकर्ताहरूको परिचालन गर्ने ।
♦ भौतिक तथा मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन, विकास र स्तरवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाले नै गर्ने ।
♦ कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाहरूले घुमन्ते वा अस्थायी बसोबास भएकाहरूका निम्ति घुमन्ते सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्था गर्ने ।
♦ निरक्षरता उन्मुलन गर्न प्रतियोगितात्मक ढंगबाट स्थानीय निकायहरूको परिचालन गर्ने ।
१४. अनौपचारिक शिक्षा
१४. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आपसी सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
यस नीतिअन्तर्गत निम्निलिखित कार्यनीतिहरू हुनेछन्
♦ अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी नीति एवम् रणनीतिहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नेछ ।
♦ समन्वय र सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्न विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अपनाउनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा परिषद् र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनकर्ताबीच पुलको काम गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रमा समता, समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्न अनौपचारिक शिक्षा परिषद्लाई मद्दत गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रबद्र्धनका कार्यहरू गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षाका लक्षित समुहका लागि बनेका योजना, कार्यक्रम र कार्य प्रगतिको विवरण सम्बन्धित संस्था, आयोग र प्रतिष्ठानहरूसँग आदान प्रदान गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षालाई समयसापेक्ष ऊर्जा दिन यसका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अध्ययनकर्ता र अभ्यासकर्ताहरूको समसामयिक गोष्ठी÷कार्यशाला÷अन्तरक्रिया गरी नयाँ विचारहरू सिर्जना एवम् वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेछ ।
♦ विभिन्न सूचक ९क्ष्लमष्अबतयच० र सूचाङ्क ९क्ष्लमभह० समेटिएकाअनुगमन एवम् मूल्याङ्कन खाका तयार तथा प्रयोग गर्ने गराउनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षामा काम गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले कामदारहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको पहलमा रोजगारदाताहरूसँग छलफल तथा सहकार्य गर्नेछ र आवश्यकताअनुसार आचारसंहिता पनि बनाउनेछ ।
माथिका नीति एवम् उपनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन्
♦ विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य संघ संस्थाहरूसँग पाठ्यसामग्रीहरूको आदान प्रदान गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित मानवीय स्रोतहरूको विकास गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू अद्यावधिक गर्न सहयोग पु¥याउने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्ने संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने र सोको अनुकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१५. निरक्षरता उन्मूलन गर्न साक्षरता
१५. निरक्षरता उन्मूलन गर्न साक्षरता अभियानलाई प्रमुख आधार बनाइनेछ । यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
१६. अनौपचारिक शिक्षा
१६. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले यस नीति, कार्यनीति र रणनीतिअन्तर्गत रही आफ्नो कार्यनीतिहरूको तर्जुमा गर्नेछन् ।